အိန္ဒိယတွင်အကောင်းဆုံးအတုကုမ္ပဏီ Shacha Technogorge:
Shacha Technoforge ထုတ်လုပ်သောအလံများ, ဂီယာ, recavators နှင့်ပိုက်တပ်ဆင်ထားသောထုတ်ကုန်များ.ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအသုံးပြုသည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် spur, helical, bevel, တီကောင်, ပိုးကောင်များ,.
ကျွန်ုပ်တို့သည် GEALD လည်ပင်းများ, မျက်စိကန်းသောအနားကိတ်များ,.
ကျနော်တို့အတုပိုက် fittings ထုတ်လုပ်ထုတ်လုပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်ထောင်စု, လက်ဝါးကပ်တိုင်, တံတောင်ဆစ်,.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်ရာကိရိယာအစုံ, REG Flange Set နှင့် Axle အပါအ0င်အတုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည်.
အကေြာင်း SHACHA TECHNOFORGE
Shacha Technoforge Rajkot ရှိ Rajkot တွင်အကြီးအကဲများကိုခေါ်ဆောင်သွားသည့်ဂူဂျာရတ်, ကျနော်တို့ကိုအတုခတ်, ဂီယာ fittings နှင့် totavators ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်ခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်.
Flanges များသည်အဆို့ရှင်များ, ပိုက်များ, ပန့်များနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်...
ပိုက် fittings အတု
ပိုက် fittings သည် directional အတွက် pipe routing တွင်ကူညီသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်...
Gear များကိုပန့်များအပါအ0င်ယန္တရားအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသည်...
ရော့ခူးများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုးအိမ် Kit, REG Flange Set နှင့် Axle တို့ထုတ်လုပ်သည်.
SHACHA TECHNOFORGE အရောင်းနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုထူးချွန်ပြီးနောက်
Shacha Technoforge အတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရပ်နေ၏. လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်မောင်းနှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်ရန်လူသိများသည်.
applanges အမျိုးမျိုးသော applications များတွင် flanges, gears များနှင့်ပိုက်များတပ်ဆင်ထားသည်. Shacha Technoforge ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ in များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့၎င်း၏ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှု၏အရည်အသွေးသည်စနစ်များရှိဖောက်သည်များနှင့်စီမံကိန်းအတွက်တိကျစွာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်းတို့ပါဝင်သည်.
ပိုက် fittings & အနားကွပ်
အိုင်တီနည်းပညာ, သုတေသန, ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ SHACHA TECHNOFORGE ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်အသစ်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ဤအချက်များအားလုံးကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်သီးသန့်ပေါင်းစပ်မှုပါ0င်သည်.
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပို့ကုန်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုအဆက်မပြတ်မောင်းနှင်နေပြီးတိုက်ကြီးများကို ဖြတ်. ကွဲပြားခြားနားသောနယ်မြေများသို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုတိုးချဲ့နေသည်. Global Pathway တစ်လျှောက်နင်းလည်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသယ်ဆောင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောကုန်သည်များနှင့်ကုန်ဆောင်သူများ၏အောင်မြင်မှုကိုကြွေးတင်နေသည်.
2022 Shacha Technoforge PVT. LTD. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ဒီဇိုင်း & ကစီမံခန့်ခွဲ : LLS - INDIA
ထုတ်ကုန်စုံစမ်းရေး? Flanges Pipe Fitting Gears Rotavator